Celtra: Qalabaynta Nidaamka Naqshadaynta Xayeysiiska | Martech Zone
Celtra: Qalabaynta Nidaamka Naqshadaynta Xayeysiinta
Sabtida, Maarso 21, 2020 Jimce, Maarso 20, 2020 Douglas Karr
Sida laga soo xigtay Forrester Consulting, magaca Celtra, 70% suuqleyda ayaa waqti badan qaata abuurista waxyaabo xayeysiis dijitaal ah intii ay doorbidi lahaayeen. Laakiin jawaab bixiyayaashu waxay xuseen in otomatikada soosaarka hal-abuurka ah ay saameyn weyn ku yeelan doonto shanta sano ee soo socota naqshadeynta hal-abuurka xayeysiiska, iyadoo saameynta ugu badan ay ku leedahay:
Mugga ololayaasha xayeysiiska (84%)
Hagaajinta nidaamka / waxtarka shaqada (83%)
Hagaajinta ku habboonaanta hal-abuurka (82%)
Hagaajinta tayada hal-abuurka (79%)
Waa maxay Madal Maareynta Hal-abuurka ah?
Mashruuc maarayn hal abuur leh (CMP) wuxuu isku daraa noocyo kala duwan oo ah aaladaha xayeysiinta ee lagu soo bandhigo oo ay ka faa'iideystaan ​​suuqgeynta iyo xirfadleyda xayeysiinta hal meel oo isku xiran, daruur ku dhisan Qalabkan waxaa ka mid ah kuwa wax dhisa naqshadeeyayaasha xayeysiinta ah oo awood u leh inay sameeyaan hal-abuurnimo firfircoon oo tiro badan, daabacaadda kanaalka iskutallaabta, iyo ururinta iyo gorfaynta xogta suuqgeynta.
G2, Aaladaha Maareynta Hal-abuurka
Celtra waa Barnaamijka Maareynta Hal abuurka (CMP) sameynta, wada shaqeynta, iyo kobcinta xayeysiintaada dhijitaalka ah. Hal-abuurka, warbaahinta, suuq-geynta, iyo kooxaha wakaaladda waxay leeyihiin hal meel oo lagu cabbiro ololeyaasha iyo hal-abuurnimada firfircoon ee laga helo aaladda adduunka iyo tan warbaahinta gudaha. Natiija ahaan, magacyadu waxay dhimi karaan waqtiga wax soo saarka waxayna si weyn u yareyn karaan qaladka.
Guud ahaan guddiga, waxaan aragnay suuq-geynta iyo kooxaha hal-abuurka ah oo la halgamaya markay tahay naqshadeynta, soo-saarista, iyo bilaabista ololayaasha suuq-geynta. Suuqleyda iyo kooxaha Hawlgallada Hal-abuurka ah waxay si firfircoon u raadinayaan barnaamijyo si loo hagaajiyo waxtarka habsami-u-socodka, socodka shaqada, cabirka iyo ku-habboonaanta wax-soo-saarkooda.
Mihael Mikek, Aasaasaha & Madaxa Fulinta ee Celtra
In kasta oo noocyadu ay la halgamayaan inay la socdaan baahiyaha hal-abuurka ah ee suuqgeynta iyo xayeysiinta maanta, haddana xogta ayaa sidoo kale muujisay xalal dhowr ah oo si firfircoon u buuxin doona farqiga u dhexeeya howlahooda hadda jira iyo u adeegidda aagagga ay daaha ka qaadeen hababkooda hadda jira. Markaad kafekerayso awoodaha taageeri lahaa abuurista iyo balaarinta waxyaabaha xayeysiinta dhijitaalka ah, jawaabeyaashu waxay doonayeen
Madal isku dhafan oo lagula socdo wax soo saarka, howlaha, iyo waxqabadka (42%)
Waxyaabaha hal-abuurka leh ee ku habboon xogta (35%)
Cabirrada lagu dhisay / imtixaanka (33%)
Hal-riix qaybinta hal-abuurka ah ee marinnada iyo kanaallada (32%)
Hawsha dhammaadka-dhamaadka ee hal-abuurka dijitaalka ah ee multichannel (30%)
Astaamaha Key Celtra waxaa ka mid ah:
Samee - Wax soo saar hal abuur leh oo si firfircoon loo qaabeeyey xogna lagu wado. Barxadku waa mid daruur ku saleysan wax soo saar hal abuur leh oo waqtiga-dhabta ah. Wax dhisayaasha xayeysiinta hal abuurka leh iyo fiidiyeyaasha wax dhisa waxay leeyihiin waayo-aragnimo udhaxeysa, is-dhexgal. Dhismaha Template iyo maaraynta leh hubaasha tayada (QA) astaamaha lagu dhisay.
Maamul - Inaad si buuxda gacanta ugu hayso wax soo saarkaaga hal-abuurka ah ee dijitaalka ah iyo hawlgallada adigoo u maraya barxad dhexe, daruur ku saleysan. Qalabka iskaashiga muuqaalka oo leh dejin iyo horudhac ayaa lagu soo daray habka naqshadeynta xayeysiinta. Hantida hal abuurka leh ayaa laga heli karaa alaabada iyo qaababkaba. Qaybinta waxaa laga heli karaa guud ahaan warbaahinta iyo baraha bulshada iyada oo la maareyn karo maaraynta hawlaha ololaha iyo isdhexgalka buuxa ee qalabka casriga ah.
Cabir - Isku soo wada duub xogta hal-abuurka ah ee marinnada oo dhan si loogu keeno xogta waxqabadka kooxaha hal-abuurka ah loona siiyo xog hal-abuur ah kooxaha warbaahinta Barxadku wuxuu leeyahay soo bandhigid caadi ah iyo cabbiraadyo fiidiyow ah, warbixin dhise iyo muuqaal ku muujiya dashboard. Waxa kale oo jira dhoofinta badan ama ka warbixinta API ee isku dhafka natiijooyinka waxqabadka.
Tags: xayeysiis hal abuur lehxayeysiin hal abuur lehCeltracmpwaa maxay cmp
La kulan 3 Wadayaasha Waxqabadka Ololaha Qaadashada Isticmaalaha
Raadi Saameyntaada: Abuur Wadahadallo Caalami ah oo ay Hoggaaminayaan Mawduucyada La Waxyooday